Dani Alves Oo Dhaawac Ku Seegi Doona Finalka Copa del Rey. - jornalizem
Ciyaarhanka 29 jirka ah ee reer Brazil ayaa dhakhtarka loo qaaday si loogu sameeyo qaliin kadib markii u ka jabay kalxanta midig markii lagu gudo jiray tababarka kooxdiisa, taasoo ay sababtay isaga oo si xoogan dhulga ugu dhacay.
Kooxda Barcelona ayaa ku dhawaaqday in ciyaarhankooda Daafaca midig Dani Alves uu ka jabay kalxanta midig mar lagu gudo jiray tababarka arbacadii, sidaasi daraadeedna aanu ka qayb qaadan doonin ciyaarta kama danbaysta ah ee Copa Del Ray.
Sikastaba ha ahaatee Barcelona ayaan wali shaacin inta uu maqnaan doono Dani Alves inkastoo dhakhtaradiisu ay sheegeen in ay saxaafada usoo bandhigi doonaan arinta ku saabsan jabniinka ciyaaryahanka.
Alves oo dibada looga saaray ciyaartii ay kooxdiisu la lahayd Real Betis ayaa lala xiriirinayay in uu ka huleeli doono kooxda reer Catalan xagaagan, hase yeeshee macalinka sii socda ayaa ku tilmaamay Dani Alves nin aan labadali karin, isagoo ciyaaryahanka kale ee reer Argentine Javier Mascherano uu ku amaanay Dani Alves in uu yahay daafica ugu wanaagsanaa dunida.
Barcelona ayaa ciyaaridoonta isaga oo uu kamaqanyahay mid kamid ah ciyaartoydooda lafdhabarta u ah Dani Alves Copa Del Ray.